घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू Daley Blind Childhood Story Plus Untold Biography Facts
एलबी फुटबल प्रतिभा को कहानी को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात गर्दछ; "Scholletje जूनियर"। हाम्रो दलले ब्लाइन्ड बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाइँका बचपनबाट मितिको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध र अन्य बन्द-तथ्य तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो बहुमुखीता बारे जान्दछन्। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू डेल ब्लाइन्डको बियोको बारेमा धेरै चिन्ता छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
डेल्लि ब्लाइन्डले नीदरल्याण्डको एम्स्टर्डममा मार्च9को 1990th दिनमा जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, य्वननी ब्लाइन्ड र बुबा डैनी ब्लाइन्डमा जन्मिए।
हाम्रो डाली ब्लाइन्ड बचपन कथा एक जवान र बुद्धिमान केटाको कथा हो जुन जन्ममा देखा पर्यो आनुवंशिक रूपमा उनको पितालाई धन्यवाद सबै असाधारण फुटबल प्रतिभाको साथ। उनको पिता, डैनीले उनलाई स्कूलमा राखे, जसले उनलाई खेल अवधिको समयमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने मौका दिए।
ब्लाइन्ड आफ्नो गृहनगर क्लब, अजक्स को युवा अकादमी मा आफ्नो क्यारियर शुरू गर्यो, उनको पिता डनी एक पेशेवर को रूप मा उनको नाम बनाएको एक नै क्लब। आफ्नो पिताको प्रभावको बावजूद, डेल अझै पनि एक थियो उनीहरूको सपना सत्य आउँदैन र उनको महत्वाकांक्षाहरू मात्र एक पासो फैंसी थिएनन्।
"मेरो बुबा जो मेरो सबैभन्दा राम्रो मित्र हो मैले खेलकुद दिनको समयमा उनको व्यक्तिगत शुभकामनाको रूपमा महत्त्वपूर्ण म्याचमा बाहिर निकाल्न प्रयोग गर्दछु। मैले कहिलेकाहीं मलाई खिलौने वा खेलहरू किन्न सक्दिनँ, केवल एक फुटबल। म उहाँका सबै कामहरूको लागि पूर्णतया कृतज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले सधैं मलाई धक्का दिनुभयो। उनको बिना, मलाई यो अविश्वसनीय यात्रा छैन जुन अहिले सम्ममा छ। '
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
5 सम्म 8 सम्म (1995-1998), ब्लाइन्ड एएफसी (अमस्टरडम्सचे फुटबल क्लब) को लागी खेलेका छन् जसले उनलाई फुटबलको लागि राम्रो आधार प्रदान गर्यो। अकादमी मा, उनको युवा कोच एडविन टेलमैन, उनको पिता एक व्यक्ति संग राम्रो तरिकाले बंधन गरे। अर्कोमा उनको छोराको नजिकको नजर राख्न, डैनीले अज्याक्स अकादमीमा आफ्नो छोरा नामाकरण गर्ने निर्णय गरे जहाँ उनी प्रशिक्षक थिए।
अज्याक्स र नेदरल्यान्ड्सका छोराहरू हुनु भएको थियो दाबी ब्लाइन्ड कुनै पनि युवा फुटबलरमा सजिलो नहुन सक्छ। उच्च आशाहरु लाई डेलि ब्लाइन्ड को पछि को पालन गरेको छ, र चाँडै आफ्नो कैरियर मा, यो दिखाई दिए कि उनलाई भेटन को लागि संघर्ष हुन सक्छ।
आफ्नो पिताको प्रभाव मार्फत, ब्लाइजले अज्याक्समा एक सफल क्यारियर सुरू गर्यो र युनियन रेन्क्समार्फत गुमाए, आफैंलाई टीममा एक वरिष्ठ स्थान कमाई। यो यस अवधिमा उनीहरूको पिताले क्लबको बोर्ड सदस्यलाई गुमाए।
एक उपयोगिता खेलाडीको रूपमा, ब्लाइन्ड बायाँ-ब्याक, बायाँ पछाडी-ब्याक, मध्य-ब्याक र रक्षात्मक मिडफिल्ड खेलाडी। उनले आफैले क्लबको साथ चार लगातार अरेडिभियस खिताबहरू जिते। आफ्नो परिवारमा बलियो फुटबल जडानको माध्यमबाट, उनको बुबा पछि नेदरल्यान्डका सहायक प्रशिक्षक बने। यो पनि समय डिल ब्लाइन्ड संग 2013 मा अजक्स को लागि वर्ष को टीम प्लेयर जीता संग संगत छ, यसैले एक कल लुईस वान गल राष्ट्रिय टोलीको कर्तव्यको लागि।
यो 2014 विश्वकपको केही दिनअघि उहाँका बुबाको साथी थियो लुईस वान गल उनको मैनचेस्टर संयुक्त काम मिल्यो। ब्लाइन्ड स्न ब्राजिलमा विश्व कपको दौडान संयुक्त मालिक मालिक सहायक प्रशिक्षक थिए र उनको पुत्रको चालमा भूमिका खेल्ने निश्चित थियो।
प्रतियोगिताको ठीक एक वर्ष पछि August० अगस्त २०१ 30 मा, म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्लाइन्डमा हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता गरे। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटबल एक सुनको रूख हो, एक ठाउँ जहाँ लाखौं युवाहरूले छाया र प्रेम पाएका छन्। हरेक महान मानिसको पछि, त्यहाँ एक ठूलो छोरो हो र त्यो छोरोमा सुन्दर ग्लैमरस महिला हो। ब्लाइन्ड ब्लाइन्ड उनको लिपिकेकी प्रेमिका कैंडी-राई फुलरसँग लामो समयसम्म सम्बन्धमा भएको छ।
कैंडी-राई एक आदर्श र नर्तक हो पुन: सुरू गर्नुहोस् जुन एमटीवी ईएमएको मा रोबिन थिकेसँग नृत्य समावेश गर्दछ। त्यो एम्स्टर्डमबाट छ र हर्मन वेस्सेलकिङ्क कलेज (स्नातक स्तरमा 2007) बाट स्नातक। उनको लिंक गरिएकोइन पृष्ठले यसलाई राख्दछ, त्यो हाल एक प्रसारण मिडिया पेशेवरको रूपमा कार्य गर्दछ।
यो थाहा छैन कि जोडी कसरी एक साथ भएको छ तर तिनीहरू तल चित्रमा गम्भीर प्रेम-अप हेर्नुहोस्।
जस्तो कि डेल ब्लिन्डले यसो भन्छ। "म आफैलाई नियमित मान्छेको रूपमा देख्छु, र हामीलाई, एक साधारण जोडा। मलाई लाग्छ कि मेरो प्रेमिका कैंडी-राईको लागि कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ किनकि फुटबलरले ल्याटेरियालाई धेरै ध्यान राख्नुको अर्थ हो। मेरो जीवनको प्रेम मलाई ठूलो सहयोग दिईन्छ र म पनि उनको लागि पनि प्रयास गर्ने प्रयास गर्दछु। "
अलिकति नराम्ररी नै लुकेको लुगा लगाउँदा सामान्य तरिकाले, कैंडी-राई फेर्नले एकपटक उनको प्रेमीलाई समर्थन गर्नको लागि उनको नृत्य कर्मचारी ल्याएर उनको विनाश प्रकट गरेको छ। एक अनुहार टोपी भनिन्छ "टोली ब्लाइन्ड" मैनचेस्टर संयुक्त डिफेंडरको लागि समर्थन देखाउने नयाँ तरिका थियो।
तल चित्रित रूपमा, सुन्दर गोन्दु र भ्यालेन्टाइनको समूह सबैलाई फैशन सहायकको साथ देखियो "टोली ब्लाइन्ड स्नैपब्याक क्यापहरू" जो उनि प्रशंसकहरु को ध्यान पकडने मा प्रयोग गरे को रूप मा उनि स्टेडियम मा चले गए।
कैंडी-राई फैशनलाई माया गर्नुहुन्छ, तर त्यो सबै मेल खानेकुरा जाने छैन। उनले बस सुनिरहेकी थिइन् कि उसले रातो र राष्ट्रीय सहयोगको लागि केहि न्यानो जस्तो देखेको जस्तो देखिन्छ।
फुटबलरको प्रेमिकाको बावजूद, कैंडी राईले वागको रूपमा पठाउन चाहँदैनन्। उनी एक पटक यसो भने: "म एक WAG होइन, मलाई एक खेलाडीको प्रेमिका जस्तो लाग्छ। यो अर्को राउन्ड राउन्ड हो! उहाँ नर्तक हुनुहुन्छ! "
फेलर थपियो: "संयुक्त राष्ट्रको लागि यो उल्लेखित, हरेक पत्नी वा प्रेमिकाले जहाँ जहाँ गए पनि फोटोग्राफर पाउनेछन्। जब हामी अज्याक्समा थियौं र कहिलेकाहीँ हामी सबै बाहिर गएका थियौ, वरिपरी एक फोटोग्राफर पनि थिएन।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
ब्लाइन्ड धेरै मित्रवत छ र उनी अक्सर धेरै फरक मान्छेको कम्पनीमा भेट्टाउँछन्। उहाँ निस्सन्देह हुनुहुन्छ, सधैं अरूलाई मदत गर्न इच्छुक छ, पछाडी केहि पनि प्राप्त गर्न आशा बिना। डाली ब्लाइन्डको जीवन समानुभूति र भावनात्मक क्षमता व्यक्त गरिएको छ। उहाँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ र उनको प्रेमिकालाई अत्यन्त विश्वासी हुनुहुन्छ, कैंडी-राई फेलर।
व्यक्तिगत शक्ति: उनी आफ्नो प्रेमिका कैंडी-राई फुलरको लागि दयालु, कलात्मक, सहज, सज्जन, बुद्धि र धेरै संगीत धन्यवाद।
व्यक्तिगत कमजोरीहरू: उहाँ डरलाग्दो, अधिक भरोसा राख्ने, दु: खी र वास्तविकताबाट बचाउन चाहनुभएको हुन सक्छ।
कस्तो डाली ब्लाइन्ड मनपर्छ: केडीई-राई फ्लीरको साथ एक्लै हुनु, सुत्न, संगीत र उनको साथ रोमान्स।
के डाई ब्लाइन्डले मन पराउँदैन: मानिसहरूले दावी गर्छन् कि उनीहरु सबै जान्दछन्, आलोचना भइरहेको छ, अतीत फिर्ता फिर्ता आउन र कुनै पनि प्रकारको क्रूरता।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
डाली ब्लाइन्ड उच्च वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। ब्लाइन्ड हाउसमा, यो फुटबल हो कि अधिकांश कुरा। यद्यपि यो घर फुटबल शर्ट भन्दा पूर्ण छैन किनभने तिनीहरू पुरुष भन्दा अधिक महिला हुन्। अब हामी तपाईंलाई डेल ब्लाइन्ड परिवारका सदस्यहरू परिचय गर्छौं।
आमा: दली ब्लाइन्ड य्वन ब्लाइन्डको आमाले तल आफ्नो पतिसँग चित्रण गरेको छ।
य्वननी ब्लाइन्डलाई कसैले चिनिन्छ जुन उनको छोरा, दाईलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडमा सार्न मद्दत गर्दछ। Yvonne Blind को कालो पेज एक क्षण को परिभाषित गर्दछ जब उनको र उनको पति दुवै 2006 मा ट्राफिक दुर्घटना मा शामिल थिए। दुर्घटनामा संलग्न व्यक्ति (पीडित) लाई कारबाट काट्न र अस्पतालमा पठाइन्थ्यो।
Yvonne को पतिले भने कि अफसोस: "तथ्य यो हो कि म शराब संग व्हील पछि बसेको अशुभ छ र कहिल्यै भयो। म गहिरो शर्मिरहेछु र महसुस गर्दछु कि मेरो स्थानमा कसैले जिम्मेदारी लिनु पर्छ। त्यसो भएन यो स्थितिले सबैलाई अधिक दुखाइ बनाउँछ। "
ग्रान्ड आमाबाबु: डाली ब्लाइन्डको दादा हेलोवीट्सस्लुसबाट छ। उहाँ मा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ Zeeland डच प्रान्तको पावर उद्योगमा उनको प्रतिष्ठित क्यारियरको लागी धन्यवाद। डाली ब्लाइन्डको दादी को छ Vlissingse, दक्षिण पश्चिम नीदरल्याण्ड मा एक नगर पालिका। उहाँ एक अशु हुनुहुन्छ जसलाई उहाँले एक चोटि एक मृत्यु भएको दुर्घटनाले एकदमै पीडा देखाउनुभयो।
SISTERS: डाली ब्लाइन्डका नाममा दुई अचम्मका बहिनीहरू छन्; Zola र Frenkie अंधा।
उनीहरूको तस्विरमा हेर्दा, जेला उनको भाइ भन्दा ठूलो छ र फ्रेनकी धेरै सानो छ। Zola पनि उनको बच्चा भाइ को लागि उपयोगी छ।
पिता: घरको टाउकोमा धन्यवाद, फुटबल ब्लाइन्ड परिवारको लागि एक पारिवारिक मामला बनेको छ। ब्लाइन्डले दायाँ डिफेंडरको रूपमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरु गर्दछ।
उनले एक्सट्यूम अगस्त 29 मा पेशेवर फुटबलमा स्पार्टामा बहस गरे। जुलाईमा 1979 ब्लाइन्डले प्राविधिक निर्देशक जोहान क्रुजीफको प्रशंसा गरे। डेनी ब्लाइन्डले खेलकुद दिनको दौडान निम्न शीर्षकहरू जिते; चैंपियन्स लीग (1986), युरोपेली कप II (1995), UEFA कप (1987) र विश्व कप (1992)। उनले डच लेगमा कुल 1995 खेलहरू खेलाए र 537 समय स्कोर गरे। डेनी आफ्नो खेल दिन को समयमा आफ्नो छोरा दल संग एक राम्रो समानता थियो।
डैनीले डच राष्ट्रिय पक्षसँगको भूमिका लिनुअघि 2005 मा अज्याक्स एरिडिभिय च्याम्पियनलाई व्यवस्थित गर्नुभयो। भ्यान गल 2012 मा। 2017 मा, उनलाई खराब परिणामहरूको कारण राष्ट्रिय टोली सहायक प्रशिक्षकको रूपमा फायर गरिएको थियो। पूर्वी सूर्गबर्गमा जन्मे, डैनी स्पार्टा रोटरडैम, अज्याक्स र डच राष्ट्रिय फुटबल टोलीको लागि खेले। अज्याक्समा, उनी धेरै लोकप्रिय भए कि निर्देशकहरूको क्लब बोर्डले प्रशिक्षकको रुपमा काम गरिसकेपछि पछि तिनले बोर्ड सदस्य बनाए।
डेनी ब्लाइन्डले नेदरल्याण्डका लागि डिफेंडरको रूपमा प्रभावशाली क्यारियर थियो। उनी युएईए र फिफा द्वारा मान्यता प्राप्त सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्लब प्रतिस्पर्धा जित्ने एकमात्र डच फुटबल खेलाडी हुन्।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Theresa Smalling द्वारा प्रेम
क्रिस सानो एक पटक उनको आमाको बारेमा घटेको डाली ब्लाइन्ड भन्दा बढी उनको जस्तो।
क्रिस सानोङको खराब प्रदर्शनको कारण प्रशंसकले डिएईलाई आफ्नो समानताको विशेषता राखेका थिए, एक विशेष फ्यानको टिप्पणीले केही घृणाको कारण देखाएको छ जुन तल तल बिचमा देखियो।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर बल
एक रक्षात्मक मिडफिल्डरको रूपमा, ब्लाइन्ड मनपराउने खेल खेल्न र छिटो कब्जा गर्न पछि नयाँ आक्रमण सेट अप गर्छ। बायाँ-ब्याकको रूपमा, तिनी फर्केर जान्छ जस्तो देखिन्छ र फर्काउन कहिले। यो सबै मा कुञ्जी ब्लाइन्डको सामरिक जागरूकता र खुफिया छ।
जहाँसम्म उनको बल चिन्तित छ, यो सही समयमा सही कार्य लिनको बारेमा छ।
Daley Blind बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर कमजोरीहरू
यो बहस हुन सक्छ कि एक दल ब्लाइन्ड एक रक्षात्मक मिडफिल्डर हो जसले शारीरिक तवरमा बलियो बनाएको छैन र राम्रो टेलले सुरु गर्न सक्षम छैन, विशेष गरी शक्तिशाली स्ट्राइकरहरू।
उहाँलाई अवलोकन गरिसकेपछि, एकले निष्कर्ष निकाल्नेछ कि त्यो एकदम कम कमजोर देखिन्छ। पूर्ण-पछाडि, उनको गतिको कमीले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Daley ब्लाइन्ड बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.